LIVE: Wararkii U Dambeeyay Ee Caabuqa Coronavirus Ee Caalamka Oo Dhan. – Heemaal News Network
LIVE: Wararkii U Dambeeyay Ee Caabuqa Coronavirus Ee Caalamka Oo Dhan.
Madaxweynaha iyo Baarlamaanka Botswana Oo loo Karantiilay Shaki la Xiriira Coronavirus.
Baarlamanka dalka qaarada afrika ku yaalla ee Botswana oo ka kooban 64 xubnood ayaa galay karantiil, ka dib markii dhakhtar baaritaan marsiiyay isagii laga helay Coronavirus.
Mudanayaasha baarlamaanka Botswana oo uu ku jiro madaxweynaha Mokgweetsi Masisi ayaa la karantiilayaa 14 maalmood oo loo baari doonaa cudurka loo yaqaan ‘coronavirus’, ka dib markii dhaqtar caafimaadkooda baarayey isaga laga helay cudurkan.
Dhaqtarka ayaa hubiyay heerkulka qaar ka mid ah xildhibaanada Arbacadii intii lagu guda jiray fadhiga gaarka ah ee baarlamaanka, kaasoo looga doodayey soo jeedinta madaxweynaha ee ah in lagu kordhiyo xaalada degdeg ah lix bilood.
Wasiirka Caafimaadka, Lemogang Kwape, ayaa sheegay in dhamaan xildhibaanada baarlamaanka iyo madaxweynaha la karantiilay, lana hubinayo iney qaadeen cudurka COVID-19.
Qiyaastii 150 xubnood oo ka tirsan qoyska boqortooyadda Sacuudiga ayaa la rumeysan yahay inuu saameeyey cudurka Coronavirus, lix toddobaad kadib markii boqortooyada ay shaaca ka qaaday kiiskii ugu horreeyey, waxaa sidaas qoray wargeyska caanka ah New York Times.
Iyada oo heerka faafitaanka cudurka ee boqortooyada uu kasii darayo, ayaa 500 oo sariirood waxaa lagu diyaariyey isbitaallada ugu wanaagsan dalka, kuwaas oo loogu talo-galay xubnaha boqortooyada.
Sida uu qoray New York Times, Amiir Faisal bin Bandar bin Abdulaziz Al Saud, oo ah badhasaabka gobolka Riyadh, islamarkaana uu adeer u yahay boqor Salmaan, ayaa ka mid ah xubnaha uu cudurka ku dhacay, wuxuuna ku sugan yahay xaalad deg deg ah.
Boqor Salman, oo 84 jir ah, ayaa isku go’doomooiyey jasiirad ku taalla meel u dhow magaalada Jeddah.
Illaa iyo hadda ma cadda heerka uu gaadhsiisan yahay iyo sida uu cudurka ugu dhex-faafay boqortooyada.
Sacuudiga ayaa billowgii hore awoodday kaliya inay sameyso tijaabooyin xaddidan oo cudurka ah, taasi oo ay suurta-gal tahay inay sahashay in ayada oo aan la ogeyn uu cudrka ku dhex-faafo boqortooyada.
2,900 oo kiis oo cudurka ah ayaa laga xaqiijiyey guud ahaan Sacuudiga, iyada oo 41 qof ay u dhinteen
Dawladda Soomaaliya ayaa xaqiijisay in qofkii ugu horreeyey uu Soomaaliya u dhintay cudurka Coronavirus, sida uu sheega Af-hayeenka wasaaradda Warfaafinta Ismaaciil Mukhtaar.
Bukaanka dhintay ayaa ahaa 58 Jir aan Dalka ka bixin, Waxaana intii aan la xaqiijin lagu dawaynayay Isbitaalka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.
Soomaaliya waxaa ilaa haatan laga helay 8 kiis, waana qofkii ugu horreeyey ee cudurkan u dhintay.
Dawladdu faahfaahin kama bixin in ninkaasi uu fayraska qaadsiiyey dad kale.
Dawladda Soomaaliya ayaa 16-kii bishii maarso xaqiijisay in qof Soomaali ah markii ugu horraysay laga helay cudurka Coronavirus.
Wasiirka Caafimaadka Soomaaliya Fowsiya Abiikar Nuur ayaa xilligaas sheegtay in kiiskan laga helay qof Soomaali ah oo ka yimid dibedda, qofkaasi oo lagu hayo meel gaar ah, iyadoo markii dambe la shaaciyay inuu ka bogsooday xanuunka.
Jabuuti Oo Shaacisay 14 Qof Oo Laga Helay Coronavirus Iyo Tirada Dadka Kor U Dhaafay 130 Kiis.
Dawlada Jabuuti ayaa xaqiijisay in diwaan-galiyay maanta 14 qof oo laga helay xanuunka halista ah ee Coronavirus, taasoo wadarta guud ee dadka uu haleelay caabuqan ee ku nool Jabuuti ka dhigaysa 135 qof .
Wasaarada caafimaadka Jabuuti ayaa Warsaxafadeed ay soo saaratay ku sheegtay in maanta caabuqa Coronavirus laga baaray 427 qof oo laga shikisanaa, waxaana Covid-19 laga helay 14 ka mid ah dadkii laga baaray
Sidoo kale wasaarada Caafimaadka ayaa sheegtay in 14 qof ee laga helay caabuqa Coronavirus ay 13 ka mid ah ay ahaayeen dad la kulmay dad qabay xanuunka , halka qofka 14aadna uu ahaa bukaan cusub oo aan hore looga shikisanayn ,iyadoo qaar ka mid ah dadka laga helay caabuqa Corona-virus oo xaaladoodu halis tahay islamarkaana la dhigay Isbitaal ku yaala Carta.
Xaalkan ayaa waxa wax la iska waydiiyay sida ay isku qabanayaan ilaalinta xogta shaqsiga, iyo la socodka dhaqdhaqaaqa ee dawladu bilawday, waxana afhayeenka oo ka jawaabaysa dareenkan ay tidhi sharciga Turkiga uu ogolyahay in laga baaraandego xogta shaqsiyeed ilaalinteeda iyo badbaadada guud ee booliska.
Rai’sal wasaaraha UK Boris Johnson, ayaa la sheegay in xaaladdiisa caafimaad ay ka soo reyneyso kaddib markii habeenkii labaad uu ku baryay qeybta daryeelka degdegga ah ee isbitaalka oo la dhigay habeen hore.
Wasiirka Caafimaadka UK Edward Argar ayaa sheegay in Boris Johnson uu haatan neefta qaadanayo, lagana furay qalabka oksijiinta ee neefta ka caawiya dadka uu naqasku ku dhego.
“Waxaan ogahay in xaaladdiisa ay ka wanaagsantahay sidii hore, hadda si wanaagsan ayuu u neefsan karaa oo uma baahna qalabka dadka ka caawiya neefsashada,” ayuu yiri Argar.
Ma jiraan warar dheeraad ah oo laga filayo xaaladda Mr Johnson ilaa iyo galinka dambe ee Arbacada maanta ah.
·”Lama hayo cadeymo buuxa oo naga caawin kara inaan go’aan qaadanno” oo ku saabsan goorta ay UK qaadi doonto xayiraadaha saaran dalka” ayuu yiri wasiirka oo intaas ku daray in haatan aysan jirin wax laga welwelo oo ku saabsan xaalada Boris Johnson.
Ugand Oo Ciqaabaysa Saraakiil Jir-dil U Gaystay Haween Jabiyay Xayiraadii Coronavirus.
Toban Askari oo ka tirsan booliiska dalka Uganda ayaa loo haystaa eedeymo la xiriira inay jirdil u gaysteen haween, waqti ay ilaalinayeen bandooda lagu soo rogay dalkaasi ee looga golleeyay in lagu xakameeyo faafitaanka coronavirus, sidaana waxaa Talaadadii sheegay ilo wareedyo ka tirsan Ciidamada Booliska Uganda.
Saraakiishan ayaa lagu eedeeyay inay qabteen 38 haween oo bandoodaas ku xadgudbay, kadibna ay ku qasbeen inay ku dabaashaan biyo dhooqo ah, bahdil iyo jidh-dil dheeraaad ahna ay igu dareen, waxana uu falkani ka dhacay magaalado ku taal waqooyiga dalkaas oo lagu magacaabo Elegu.
10-ka sarkaal ayaa lagu hayn doonaa xabsi ciidan ilaa 7da May, sida ay sheegeen boolisku.
Sawirada falkan tacadiga ee loo gaystay dumarkan ayaa lagu wadaagay baraha bulshada, waxana sawiradaas ka muuqday dhaawacyo loo gaytay dumarkan, dharkooda oo ay dhooqo ka muuqato iyo walwal dheeraad ah oo ka muuqda.
Dowladda Somaliya Oo ku Dhawaaqday Kiis Cusub Oo Coronavirus Laga Helay Muqdisho.
Wasaaradda Caafimaadka dowladda Soomaaliya ayaa goor dhow ku dhawaaqday in Kiiskii 8-aad ee Corona Virus ah laga helay Magaalada Muqdisho.
War kasoo baxay Wasaaradda Caafimaadka ayaa lagu sheegay in ruuxa uu degaan ku yahay Muqdisho, islamarkaana uusan ka imaan dalka dibadiisa.
Warka Wasaaradda ayaa siddaan u qornaa:
Waxaa soo kordhay xaaladii 8aad oo xanuunka COVID-19 lagu xaqiijiyey. Waa muwaadin Soomaaliyeed oo lab ah, da’diisuna tahay 58 sano, wuxuuna deegaan ku yahay Muqdisho oo safar kuma imaan.
Tirada guud ee la xaqiijiyey: 8
Tirada bogsashada : 1
Tirada dhimashada : 0
Jabuuti Oo Maanta Shaacisay in 31 Qof Oo Hor Leh Laga Helay Caabuqa Coronavirus.
Dawlada Jabuuti ayaa shaaca ka qaaday in maanta diwaan-galisay 31 qof oo laga helay xanuunka halista ah ee Coronavirus, taasoo wadarta guud ee dadka uu haleelay caabuqan ee ku nool Jabuuti ka dhigaysa 135 qof .
Wasaarada caafimaadka Jabuuti ayaa Warsaxafadeed ay soo saaratay ku sheegtay in maanta caabuqa Coronavirus laga baaray 450 qof oo laga shikisanaa, kuwaasoo laga helay 31 ka mid ah Covid-19 baaritaanka kadib
Sidoo kale wasaarada Caafimaadka ayaa sheegtay in 71 qof oo ka mid ah dadka laga helay caabuqa Corona-virus oo xaaladoodu halis tahay la dhigay Isbitaal ku yaala Carta, halka inta kalena lagu hayo xarun lagula socdo xaaladooda,Iyadoo xustay inay caabuqa ka bogsadeen 18 ka mid ah dadka uu ugu horayntii soo ritay xanuunkaasi safmarka ah ee dhibaatada ku haya caalamka oo dhan.
Gobolka Waqooyi Bari Ee Kenya Oo Laga Xaqiijiyay Kiisas Coronavirus ah.
Waxaa la xaqiijiyay labo qof oo uu ku dhacay cudurka Coronavirus kuwaas oo ku nool magaalada Mandheera ee gobolka Waqooy bari ee Kenya, sida uu xaqiijiyay wasiirka caafimaadka ee Kenya.
Labadan qof ayaa la sheegay inay kasoo safreen magaalada Mombasa ee ku taalla gobolka xeebta.
Wasiirka wuxuu sidoo kale xaqiijiyay in 14 qof oo hor leh in uu ku dhacay cudurka Coronavirus gudaha dalkaas.
Guud ahaan tirada dadka uu ku dhacay Covid-19 guud ahaan Kenya waxay gaarayaan 172 qof.
UGANDA OO QORSHAYNASA IN DUGSIYADA LAGU LAABTO
Wasiirka Waxbarashada Uganda Jenet Museveni ayaa sheegtay in dugsiyada gaar ahaan kuwa hoose iyo kuwa dhexe dib loogu laabanayo 27ka bishan April, iyada oo intan dba dhigtay in qorshayaashii lagu xakamaynayay coronavirus ay u saamaxayaan dugsiyadan in ay tacliintooda sii wataan.
Hadalkan ka soo yeedhay Wasiirada ayaa dadka reer Uganda ay dareeno kala duwan ka bixiyeen, waxana ay qaarkood xuseen dugsiyada dib loo furayo ay xukuuadu ku dagdagayso maadaama oo aan wali calamka iyo dalkaasi xanuunkan laga cidhib tirin.
Qaar kale oo dadka reer Uganda ka mid ah ayaa go’aankan soo dhaweeyay, waxana ay tilmaameen in markii horaba lagu dagdagay in dugsiyada la xidho, khatarta xanuukan ee caruunta oo hosaysana ay saamixi karto in dugsiyada lagu laabto.
KENYA OO DHUL IYO CIRBA KA XIDHAY CAASIMADA NIAROBI
Madaxwaynaha Kenya Uhuru Kenyata ayaa ku dhawaaqy in dhamaan safarada iyo dadka safarka ah iyo dadka kale ee Reer Kenya ee galaya ama ka baxaya caasimada Nairobi in aan la ogolayn magaaladaasna lagu soo rogay Bandoo dhamaystiran.
Bandoodan ayaa qaadan doonta mudo sedex todobaad ah ka bilaabanaysa 7da habeeimo ee caawa oo isniin ah, waxana uu talaabadan ku micneeyay mid lagu xakamaynayo faafitaanka caabuqan covid-19.
Sidoo kale waxa uu madaxwaynahu sheegay in bandoodii iyo xayraadii dhnaca bada iyo dhulkaba ahay ay ku soo rogeen magaalo xeebeeda Mambasa io degaanada ka ag dhow ee kala ah Kilifi iyo Kwale ay wali taagan taagan tahay qasabna ay ku dhaqan galin doonaan maalinta Arbacada ah.
IVORY COAST: DAD KA MUDHARAADA XARUN CORONA LAGU TIJAABIYO OO LOO FURAY
Dadka ku dhaqn caasimada ganacsiga ee Ivory Coast ee Abdjan ayaa cagta mariyay xarun laga dhisay degaankooda oo loogu talo galay in lagu baadho caabuqa covid-19, waxaa xarunan ay dadka gadoodsan cagta mariyeen ay ahayd mid laga furay degaanka Yopougon.
Dadkan gadoodsaa ayaa cabashadooda sahayatay xaruntan waxa ay ahayd in dadladu ka dhisay xaruntan degaan saxmad ah oo ay dad badan ku nool yihiin oo u dhaw guryahooda.
Muuqaalo lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinay dadka oo qurub-qurub u kala jaraya agabkii yaalay dhismaha iyaga oo gacmahooda isiticmaalaya, dadka qaar ayaa la arkayay iyaga oo dhismaha burburinaya dhagaxa iyo ciidana kala saaraya.
Sidoo kale waxa muuqaaladaas la wadaag ka muuqday dadka qaar oo a gacmahoodu dhiigayaan dhaawacyano ay soo gaadheen.
NORWAY OO SHEETAY IN AY XAKAMAYSAY FAAFITAANKA CORONAVIRUS.
“Caabuqan Covid-19 waa la xakameeyay” ayuu yidhi Wasiirka Caafimaadka ee Norway isaga oo markaasi farta ku fiiqay in heerka uu caabuqan ku faafayo uu hada yahay mid aad u hooseeya.
“Qofka hada qaada coronavirus suurta galnimada uu ku faafin karo ama uu dad kale ku sii qaadsiin karaa aad ayay u hosaysaa waxana aan ku qiyaasnay suurta-gal nimadaas hoosaysa 0.7” ayuu yidhi Wasiir Bent Hoeie oo shir jaaaid qabay.
Wasiirka ayaa waxa uu intan daba digay in yoolka dawladu uu yahay in ay yarayso faafitaanka caabuqan kuna soo koobto in ugu badnaan uu gaarsiiyo qofkaas bukaa caabuqan qof kale oo kaliya.
Wasiirka ayaa waxa kale oo uu yidhi “Dawladu waxa ay Arbacada go’aansan doontaa in ay qaado ama sii kordhiso xayiraadahii ay ku soo rogtay dugsiyada iyo goobaha kale ee dadku ku kulmaan waxa ka dambeeya bartamaha bisan April
Spain waxa ay diiwaangalisay 24kii saac ee u dambeeyay 4,272 kii o cusub, halka ay dhimashada dadka ku tagay caabuqan covid-19 ay maalintii 4aad hoos u socoto dhimashadii u dambaysayna ay dhan tahay637 kiis, tirada duud ee kiisaska dalkaasina ay yihiin 135,035 ilaa hadana ay 13,055 qof u dhinteen.
Dhinaca kale Maraykanka wax uu galay todobaad walaac xoogan laga muujinayo natiijada ka dhalan karta ee dhinacyada dhimashada iyoo faafitaanka coronavirus ah, iyada oo dadka la gaadhsiiyay digniino ka imanaya dhinaca dawlada,dhinaca kale ay madaxu ka da digayso natiijo aan lagu farxin oo ka imanaysa dhinaca gobolada New York, Michigan iyo Louisiana in la filayo.
MARAYKANKA OO MASIIBO LA MID AH TII 9/11 KA FILAYA CORONA TODOBAADKAN
“Waxa ay noqon doontaa xaalad adag iyo todobaad aad u murugo badan si wayna u saamayn doona guud ahaan dadka Mraykanka, si laab furnaan ah marka aan u cabiro walaaca aan qabno inuu ka dhasho coronavirus todobaadkan-na waxa ay la mid tahay mugdi iyo muruga ka wayn tii weerarkii Pearl Harbor ama weeraradii Argagixiso ee 9/11” ayuu yidhi Sakaal ka tirsan Milataria Maraykanka oo lagu magacaabo Jerome Adams.
Walaac kan la mid h ayaa waxa uu hore uga soo yeedhay Madaxwayne Trump maalintii shalay, waxana ay walaacyadan madaxda ee is biirsaday imanayaan waqti tirada kiisaska ee gudaha Maraykanka laga soo sheegayaa ay kor u dhaaftay 300 oo ku oo kiis oo caabuqa Covid-19 ah
Si kastaba ha ahaatee Weerarkii Pearl Harbor ayaa waxa uu ahaa sababii kaliftay in uu Marayanku galo dagaalwaynihii 2aad ee Aduunka, kadib markii ay ciidamadii cirka ee Japan bshii december 7deedii sanadkii 1941kii ay ku ekeeyeen saldhigaas milatari weerar gaadmo ah oo ay ku dhinteen 2000 oo askari in kabaan
Halka weeraradii 9/11 ay ahaayeen kuwo ay Al-qacida ku beegsatay daarahii dhaadheeraa ee mtaanaha ahaa ee ku yaalay New York halkaas oo ay maalin kaliya ku dhinteen in ka badan 3000 oo qof oo Ameerican u badnaa
Waxana labadan dhacdo lagu tiriyaa inay yihiin kuwii ugu dhimashada badnaa ee Maraykanka soo maray taariikdiisa, dhimashadaas oo ay sababteeda lahaayeen cadaw maraykanka dibadiisa ka soo duulay, halka ay tan maanta laga walaacsan yahay ka tahay mid ay dhimashadiisa sababteeda leeyihiin coronavirus iyo covid-19 oo isku mid ah gudaha dakiisanna ka soo qaaday duulaanka
IMAARAATKA: KUMANAAN PAKISTANI AH OO DOONAYA INAY DALKOODII KU LAABTAAN
In ka badan 20 kun oo shaqaale Pakistani ah ayaa ku xaniban dalka Isutaga Imaaraatka Carabta, waxana ay si xoogan u doonayaan inay dalkoodii ku laabtaan, waqti uu wadankaasi carbeed qaaday talaabooyin adag oo xadidaya shaqada iyo dhaq-dhaqaaqaba si uu ula tacaalo aafada coronavirus.
Afhayeen u hadlay qunsuliyada Pakistan ee Imaaraata ayaa sheegay in sedxdii maalmood ee u dambaysay—tan iyo 3dii April—ay diiwaangalisay 20 kun oo muwaadin oo doonaya inay Pakistan ku laabtaan.
Ilaa hada Imaaraatka waxa laga xaqiijiyay 1,799 kiis oo coronavirus ah, halka ay 10 qof u dhinteen caabuqan, balse waxa muuqata in nolosha dalkaasi ay sii adkaanayso, dawladuna ay maalinba maalinta ka dambaysa qaadayso alaabooyn talaabooyin xoogan oo ay caabuqan daaftaankiisa kula dagaalamayso kuwaas oo ay ka mid yihiin in ay bandoo guud u soo rogtay wadankaasi, dhamaan duulimaadyadii-na ay joojisay, halka ay Mandaqada Dubai-na ay gabi ahan ka godoomisay una diiday in la galo ama laga boxo.
IRAN WALIGEED CAWIMO WAYDIISAN MAYSO MARAYKANKKA
Afhayeenka Wasaarada Arimaha Dibada ee Iran Abbas Mousavi ayaa sheegay in Wadankiisu aanu waligii Maraykanka waydiisanayn caawimo ku aadan halganka ay kula jirto caabuuqan coronavirus.
Afhayeenka ayaa waxa kaliya ee banaan ee u dhaxeeya Maraykanka iyo Iran ku tilmaamay in Washington ay tahay in ay qaado cunaqabatayta sharcidarada ah ee Jamhuuriyada Islaamiga ah uu Maraykanku saaray.
“Iran waligeed caawimo ku aadan wax ka qabashada coronavirus waydiisn mayso Maraykanka….balse Washington ha qaado cunaqabataynta sharcidarada ah ay Iran ku hayso” ayuu Afhayeen Mousavi ka sheegay shir jaraaid oo hawada si toos ah looga baahiyay.
“Maraykanku waxa ay doonayaan in ay duruufta jirta ka faaiidaystaan oo ay Iran ku qasbaan in ay miiska wada-hadalada ku soo laabato” ayuu intan ku daray Afhayeenku.
JAPAN OO XAALAD DEGDEG AH LAGA DAWAAQAY
Japan ayaa waxa ay ku dhawaaqday xaalad degdeg ah oo la galiyay magaalooyin dhawr ah oo ay ku jirto caasimada Tokyo iyo lix degaan oo kale, waxana ay tan tahay talaabo ay Japan damacsan tahay inay ku xakamayso caabuqan covid-19, waxana xaaladan degdega ah ku dhawaaqay Raysal Wasaaraha wadankaas Shizo Abe.
Japan ayaa waxa ilaa hada caabuqan laga helay 3,500 oo qof, halka ay dhimashada uu sababayna ka tahay 85 qof, waxase jira walaac laga qabo in caabuqo uu sii faafo iyada oo meelaha qatarta laga soo sheegayo ay ugu horayso caasimada Tokyo oo ilaa hada kiisaska laga helay ay kor u dhaafayaa 1000 kiis.
Intii uu socday Shirkaasi Jaraaid ee uu RW Abe sida tooska ah uga waday Telefishanka, ayaa waxa uu Badasaabada gobolada Awood u siiyay in ay dadka u sheegaa iay guryahooda jooogaan, ganacsiyadana ay xidhaa, balse ay ka taxadiraan in bandoda la soo rogay ay u muuqaal ekaato tan dalalka kale ee caabuqan ka dilaacay.
Bandoodan lagaga dhawaaqay Japan ayaa waxa ay soconaysaa mudo bil ah.
INDONESIA: HOYGA MUSLIMIINTA UG BADAN CAALAMKA OO WAR WALAAC LEH LAGA SOO WARIYAY
Indonesia waxa la xaqiijiyay in tirada kiisaska cusub ee caabuqan coronavirus ay korodhay, waxana 24kii saac ee u dambeeyay la diiwaan galiyay 218 kiis oo cusub, waxna ay tani tahay sara-u-kacii ugu badnaa ee kiisaska cusub ee corona ah ee dalkaasi laga sheegay tan iyo intuu uu caabuqu dalkaasi ka dilaacay mudo bil ah horteed.
Masuul u hadlay wasaarada Caafimaadka oo lagu magacaabo Achmad Yuriano ayaa sheegay in ay dhimasho ah 11 qof jirto 24kii saac ee u dambeeyay tanina ay kiisaska dhimashada ah ee Wadankaas Indonesia ka dhigayso 209 qof Eebe ha u naxaristee.
Indooiisiya ayaa ah wadanka ay ku nool yihiin muslimiinta ugu badan caalamka, waxana ilaa hada tirada guud ee kiisaska Covid-19 ee dalkaasi ay dhan tahay 2,491 kiis Eebe ha caafiyee.
MARAYKANKA: SHABEEL LAGA HELAY CAABUQA CORRONAVIRUS
Shabeel ku noolaa carwo xayawaan oo lagu magacaabo Bronx oo ku taala magaalada New York ee dalka Maraykanka ayaa laga helay caabuqa coronavirus, waxana la aaminsan yahay in kiiskan uu yahay kii ugu hireeyay ee noocisa ah ee xayawaan ku nool Maraykanka laga helay, sido kalena waxa uu kiiskani noqonayaa kii ugu horeeyay ee guud ahaan caabuqan covid-19 laga helo Shabeelka.
Shabeelkan oo da’diisu tahay 4 jir lagu magacaabaa Nadia, waxana uu ka mid yahay nooca shabeelka ah ee loo yaqaan Malayan Tiger ayaa waxa uu ka mid yahay 6 nooc oo xayawaano ah oo la sheegay inay xnuunsanayaan, sida ay sheegtay hayada xanaanaynta duurjoogta ee gacanta ku haysa maamuka carwadaas xayawaanka ee Bronx ee New York ku taala.
“Shabeelkan waxa uu lahaa qufac qalalan, waxa laga helay caabuqa covid-19, markii la baadhay kadib, sidan oo kalena waxa u xanuunsanaya lix xayawaan oo kale oo ay sedex shabeello yihiin, sedexna libaaxyo yihiin” ayay yidhaa
Madaxwayne Geele Oo Amar Adag kusoo Rogay Bulshada Jabuuti Markii La Helay Dad kale Oo Qaba Corona-virus.